विवाहको भोलिपल्ट श्रीमतीलाई श्रृंगार बिना देख्दा श्रीमान् चकित, डिभोर्सको माग - टि. एल. एन पोस्ट
Home अनौठो कुरा विवाहको भोलिपल्ट श्रीमतीलाई श्रृंगार बिना देख्दा श्रीमान् चकित, डिभोर्सको माग
आजकाल डिभोर्सको कुराहरु धेरै सुनिदै आएका छन् र यो क्रम बढ्दो पनि । जिन्दगीभर संगै बाच्ने संगै मर्ने कसम खाएकाहरु बिहेको केहि समयमा नै सम्बन्ध बिच्छेद गरेका समाचारहरु धेरै सुन्न पाईन्छ।
‘मैले उनलाई बिहान उठेपछि देखेँ, उनको कपाल जिङ्ग्रिङ्ग थियो… र उनलाई जस्तो देखेर विवाह गरेको थिएँ, त्यो भन्दा उनी पूर्ण रुपमा भिन्न देखिएकी थिइन् । ’
Previous articleसंसारकै महंगो डिभोर्स, सम्बन्ध विच्छेद गरेबापत तिर्नुपर्ने यति ठुलो रकम
Next article२३ बर्षे चियावाली जस्ले चिया बेचेरै कमाउँछिन महिनाकै २ लाख